“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: “ လဆွဲအားနှင့် ကျန်းမာရေး ”
နွယ်ရိုး - ИШΣ ҰӨΣ
Mini Talon Setup Component
မငုံ - ကန္တာရမိုးစက်များ
လမင်းငယ် - အချစ်တို့နဲ့ရှင်သန်ရာ
မလုလု - မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်
တန်ခူး - လေနုအေး
အပြုံးပန်း - A SMILING FLOWER
အနော် - စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်
ဘဏ်ငွေစက္ကူ အတုတွေ နဲ့ ကိုယ်တို့နိုင်ငံ
ကိုစည်သူ - ပေါက်ကရအတွေးအပိုင်းအစများ
မေဇင် - ရေးချင်တာလေး တွေ
Vigor - All Photography
ကြည်ဖြူပိုင် - နွေဦးမိုး
ကိုရန်ကုန်သား - ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း
ကိုဟန် - Dreams from my father
2mar - Too Diary
အမတငယ် - အိမ်ဝေးနှင်းဆီ ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ
မ၀ါဝါခိုင်မင်း - အမှတ်တရလေးများ
ကိုရေတမာ - လူအ အိပ်မက်
ကိုမိုးကျော်သူ - အွန်စောတို့ဌာနေ
ကိုမင်းအိမ် - အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး
၀က်ဝံပုတုကလေး ရဲ့ စံမြန်းရာ
(Jimmy) KP-3 မိသားစုမှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏
ဖြူစင်ကြယ် (angel shaper)
မိုးကောင်းသူ - ထမင်းအိုး
အနမ်း - What isagood thing ???
ကိုသာဂိ - THARGI'S LITTLE SCRAPBOOK
I'm Back! And I'm gonna be gone again soon...
ကိုဇော် - ခြေလှမ်းသစ်
NN - စိတ်ဖြေရာ
ကိုပုလုကွေး - MY REMEMBRANCE
ရန်ကုန်သူ - ဘ၀တစ်ကွေ. ....
Andrew - ရွက်လွင့်ခြင်း
သဲသဲ - အချိန်တိုင်း တွေးနေရင်း ဘဝပြောင်းနေသည်
ကိုကိုသုန် - ရင်ထဲကရက်စွဲများ
ပါးလုံး - Chitpalone
မမြတ်နိုး - ကံကောင်းခြင်း အနာဂတ်ဆီသို့ ...
ရှင်မင်း - Smoke & Spice
ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲစေလို
..ဂျစ် တူး လေး
ဖွားကိ - Idiotlove
မဟေမာန် - နှင်းသောက်ပန်း
မေသူ - နားချိန်
ဇေလေး - အနာဂါတ် ရဲ့လမ်းပြကြယ်
လဂွန်းအိမ် - Moe Eaint Phyu
ဘိုဘို - It's My Feeling !!
Ma Su Kyaw - KYAW
ဇူး - ရင်မှ မိုးစက်ပွင့်များ
မအိအိ - သုံးရာသီဘ၀ခရီး
My Virtual Home (Home Sweet Home)
တောင်ပေါ်သား - အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်
Pyae Wut Hmone
မိုးပွင့် - အလွမ်းကမ္ဘာငယ်လေး
ကိုရဲကြီး - အလင်းစေတမန်
Phyo Maw's Blog
“ လဆွဲအားနှင့် ကျန်းမာရေး ”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ Solid ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၆၅% ဟာ ရေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လဆွဲငင်အားဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကို ဒီရေတက်တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး Biological Tide လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လပြည့်နေ့လိုအခါမျိုးမှာ အများဆုံး ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ Cell တွေထဲက ရေတွေ (Intracellular Water) မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ Hypothalamus လို့ခေါ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာပါ သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒီ Hypothalamus ဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲံ နေရာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ရင် လူရဲ့ စိတ်နေသဘေားထားနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
လပြည့်နေ့ညနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို Lunar Syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်။ Lunar ဆိုတာ လက်တင်လို Moon လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး Syndrome ဆိုတာကတော့ ရောဂါစုပါ။ လပြည့်နေ့မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါစုများလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
လပြည့်နေညမှာ အရက်သောက်ရင် ပိုပြီးသွေးဆိုးပြီး ရမ်းကားတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက် Gout ရောဂါလိုဟာမျိုးလည်း အဆစ်အမျက်တွေရောင်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါတို့ ပိုဖြစ်တတ်တဲ့အပြင် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်မှု (Suicide)၊ လူသတ်မှု (Murder) တို့တွေလည်း ပိုများတတ်ပါတယ်။
လပြည့်နေ့တွေမှာ စိတ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်၊ ပိုဆိုးတတ်လို့ သတိထား ဆင်ခြင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီကာလမှာ အရက်သေက်ရင် သွေးဆိုးပြီး အမှားတွေ ကျူးလွန်တတ်တာကြောင့် အရက်သေစာ သောက်စာခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ကားမောင်းရင်လည်း Accident ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့် ဆင်ခြင်မောင်းနှင်ဖို့၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း ဒီရက်တွေမှာ လွှတ်မထားဖို့အပြင်.....
ရောဂါရှိတဲ့ ဘလောဂါ ကိုကို၊ ညီညီ၊ မမ၊ ညီမ တွေလည်း ဒီရက်တွေမှာ ပိုမိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ မေတ္တာရှေ့ ထား အကြံပြုလိုက်ပါကြောင်း...:P
Posted by Yu Ya at 11/03/2009 08:10:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Min Thant said...
November 3, 2009 at 10:56 PM
ဒါဆိုလည်း လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့ မှ ကဲကြတာပေါ့ ။ လကွယ်ညဆို အကဲဆုံး .. ကိစ္စမရှိဘူး ထင်ပါရဲ့ နော် ...း))
November 3, 2009 at 11:12 PM
ဒါဆို လပြည့်နေ့တွေဆို ဆရာဝန်တွေ
ဟုတ်မယ်ထင်တယ် တော်တော် တိုက်ဆိုင်တယ်
November 4, 2009 at 12:17 AM
ဒီမှာလည်း လပြည့်နေ့ နားဆိုရင် ဆေးခန်းကိုလာတဲ့
လူနာတွေက သိပ်စိတ်မရှည်၊ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း
ယောင်တိယောင်ချာ။ တခါတခါ သတိတရနဲ့လပြည့်
နေ့ များလားလို့ တောင်အချင်းချင်းမေးကြရတယ်။
November 4, 2009 at 1:07 AM
လဆွဲအားကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်တွေ မြင့်တက်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ် စိတ်စွမ်းအားတွေ ရောဂါတွေကိုပါ တိုးအောင် သူက ဆွဲငင်တာပေါ့နော်
November 4, 2009 at 1:15 AM
လပြည့်လို့ ဒီရေ တက်တဲ့အခါ မျိုးမှာ သက်ရှိလူတွေ ခံစားချက် အပြေင်းအလဲတွေ ဖြစ်တတ်သလို
အိုတွေထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ငပိတွေတောင် အပြင်ကို ငံပြာရည်တွေ ဝေကျတတ်တယ်တဲ့။
စာရေးဆရာမ ဂျူး ရေးတဲ့ “မြရဲ့လ” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတို လေးထဲမှာ မြဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက ရေတွင်းထဲ ခုန်ချသွားတာ လပြည့်ည မှာပေါ့
လရောင်က လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဖျားယောင်း သွေးဆောင်နိင်တယ်။
November 4, 2009 at 3:09 AM
November 4, 2009 at 5:53 AM
ကိုယုယ ရေ ခရေညို လည်းယုံတယ်။ ပြီးတော့
လပြည်.ညတွေမှာ ဆေးကိုကြိုတင်သောက် ထားပါ့မယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညဆို 12နာရီတိတိမှာ လမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီး မယ်ဇလီဖူးသုတ်စားပြီးဆုတောင်းရင် ပြည့်တယ်ဆိုလို.
ဟုတ်မယ်ကိုယုယရေ။ လပြည့်ညဆို စာချည်းပဲ ရေးချင်၊ ဖတ်ချင်နေတော့တာ။
Lunar Syndrome တဲ့။ ကြိုက်မိတယ်။း)
November 4, 2009 at 7:38 PM
အဲလိုဆို ကျွန်တော်က ရောဂါထလို့ ခုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့
အေးဗျ.. ဗဟုသူတတော့ အတော်လေးကို ရသွားတယ်
အဲလိုငေးလိုက်မိလို့ အဲလို ဖြစ်သွားတာလေ..း)
လ အကြောင်းလေးတွေက အတော် စိတ်ဝင်စား စရာတွေပါပဲဗျာ
အနုပညာသမားတွေအတွက် စိတ်ကူးယဉ်လို့ အကောင်းဆုံးပေ့ါ။
November 7, 2009 at 9:53 PM
ဟုတ်စ်ကဲ့... ဆင်ခြင်ပါ့မယ်ခင်ဗျ။ ဟဲဟဲ
Name......: yu ya
Tel.......: 6520 2430
" Wow... Am I getting old..! "
“ ထာဝရ အချစ် ”
" Two Days We Should Not Worry "
“ Heart to Heart ”
“ အတွေးရတနာ ”
“ စကားလုံး အလင်္ကာ ”
“ Off Day & Day Off ”
Pls Mind Your Time
Copyright (c) 2010 “ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”. All rights reserved. Powered by Blogger